Daadad barabixiyey ilaa 300,000 dalka Suudaan - BBC News Somali
Daadad barabixiyey ilaa 300,000 dalka Suudaan
23 Agoosto 2013
Image caption Daadadka Sudaan
Dalka Sudan, in ka badan ilaa 300,000 oo qof ayaa ku barabaxay, qaar kalena waa ku dhinteen daadad xoog leh iyo fatahaad ka timid roobab laxaad leh oo ka da'ay dalkaasi.
Sida ay sheegtay hey'adda Qaramada Midoobey u qaalbilsan caafimaadka adduunka ee WHO, dad ku dhawdhaw ilaa 50 qof ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhinteen, 70 kalena ku dhaawacmeen daadadkaas bishan August.
Degaannada waxyeellooyinka ugu weyni gaadheen waxa gaar ahaan ugu daran magaalo-madaxda Khartuum oo daadadkii ugu xumaa ilaa 25-kii sano ee ugu danbeeyey ay qarqiyeen. Dibaaatooyinka ugu badan ee xagga caafimaadka, sida ay sheegtay WHO, waxa ka mid ah 53,000 musqulood oo daadadku dumiyeen.
WHO waxa kale oo ay intaasi ku dartay in guryo badani ku baaba'een ilaa 14 gobol oo ka mid ah gobollada dalkaasi, oo daadadku aafeeyeen.
Madaxa xafiiska Qaramada Midoobey u qaabilsan arrimaha gargaarka banii'aadminnimada dalka Sudan, Mark Cutts, waxa uu sheegay in Jamciyadduu ay ku dedaalayso sidii ay gacan uga geysan lahayd wax-ka-qabashada dhibaatadaasi iyo taakulaynta dadkii ku waxyeelloobey.